Ciidamada Kenya oo Qabtay Sadex Qof oo laga shakiyay inay xiriir la leeyihiin Alshabaab – SBC
Ciidamada Kenya oo Qabtay Sadex Qof oo laga shakiyay inay xiriir la leeyihiin Alshabaab
Nairobi- Saraakiisha Ciidamada Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen sadex nin oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Xarakada Alshabaab oo caalamku u aqoonsanhay inay Xiriir la leedahay Ururweynaha Alqaacida.
Sarkaal Sare oo u hadlay Ciidamada Booliiska Dalka Kenya islamarkaasina ka gaabsaday in Magaciisa Saxaafada laga sheego ayaa waxaa uu u sheegay Wakaalada wararka ee AFP Inay gacanta ku dhigeen sadexdan nin oo watay walxo u muuqday in laga sameeyo Waxyaabaha qaraxa dhaliya islamarkaasina iminka Xabsiga loo taxaabay.
“waxaa lagu xiray Degaanka waqooyi bari ee wadankan Kenya waxaana ay doonayeen inay ka soo talaabaan dalkooda soomaaliya iyaga oo wata walxo lag sameeyo waxyaabo geysan kara qaraxyo waaweyn,” sidaas waxaa sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Booliiska Kenya kana gaabsaday in magaciisa la xuso.
Sadexda Nin ee ay xireen Ciidaamada amaanka Kenya ee loga shakisan yahay inay geysan rabeen qaraxyada ayaa waxaa lagu wadaa dhawaan in la geeyo Magaalada Nairobi ee wadanka Kenya si Baaritaan dheer loogu sameeyo Danbiyada lagu tuhunsanyahay.
Xirxirida kooxdan looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin Alshabaab ayaa ku soo beegmeysa xilli Ciidamada amaanka ee wadanka Kenya ay adkeeyeen Amaanka Dalkooda uu la wadaago soomaaliya.
Xarakada alshabaab ayaa horey ugu hanjabtay inay Weeraro qaraxyo ka geysan doonan Wadanka Kenya gaar ahaana Goobaha Dadku ku badan yahay Sida Dukaamada Ganacsiga,Xafiisyada DOwlada & Goobaha Kale ee Kaniisadaha IWM.
Wadanka Kenya ayaa xuduudo dhow waxaa uu la wadagaa wadanka Soomaaliya waxaana uu sidoo kale xiriir ka dhaxeeya Dowlada Xilligan ee Soomaaliya taasi oo ay xarakada alshabaabna tiro ka dhowr jeer digniino kala duwan ka soo saartay Taageerida Kenya ee DKMGS.